နယူးဇီလန် ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက် ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၂:၀၀ (MT အချိန်) တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်. NZD(နယူးဇီလန် ငွေကြေး)ကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လိုသူ traderများအနေနှင့် ထိုအတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်.
နယူးဇီလန် ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက် ဆွေးနွေးပွဲကို ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်. ဗဟိုဘဏ်၏ နောက်ဆုံးအတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ မပြောင်းမလဲရှိခဲ့ပြီး နယူးဇီလန်၏စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုသေချာတဲ့အချိန်အထိ ယခုအတိုးနှုန်းကို မပြောင်းမလဲထိန်းသိမ်းထားချင်ပုံရပါတယ်. NZDနယူးဇီလန် ငွေကြေး ကို အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လိုသူ traderများအနေနှင့် ထိုအတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်. NZD/USD နှင့်AUD/NZDတို့လိုငွေကြေးအတွဲတွေကိုရောင်းဝယ်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါ.